जिग्रीसँग प्रेम सम्भव छैन : रक्षा श्रेष्ठ - Tamang Online
नामले भन्दा पनि कामले जिग्रीको प्रेमिकाको रुपमा चिनिन्छिन् उनी । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको चर्चित हास्य शृङ्खला ‘भद्रगोल’मा जिग्री नामका एक पात्र छन् । उनकै प्रेमीका बनेकी छन् उनी ।
उनी अर्थात् रक्षा श्रेष्ठ । शृङ्खलामा पनि उनको नाम रक्षा नै राखिएको छ । ग्रामीण भेगकी एक युवतीको भूमिकामा उनी देखिँदै आएकी छिन् चाबहिलकी रैथाने रक्षाले थुप्रै विज्ञापनको अभिनयपछि हाँस्य शृङ्खलामा देखिएकी हुन् ।
थुप्रै विज्ञापन चलचित्र अभिनय गर्दा पनि खासै चिनिन नसकेकी उनी ‘भद्रगोल’मा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट भने रातारात सेलिबे्रटी बनिन् । शृङ्खलामा उनी जिग्री अर्थात् कुमार कट्टेलको प्रेमिकाको भूमिकामा देखिने गरेकी छन् ।
वास्तविक जीवनमा भने अहिलेसम्म प्रेमको अनुभव नभएको उनी बताउँछिन् । जिग्रीसँगको प्रेम पर्दाभित्रको मात्र बताउने उनी पर्दा बाहिर उनीसँग प्रेम असम्भव रहेको बताउँछिन् । केही म्युजिक भिडियो समेत अभिनय गरेकी रक्षासँग दश प्रश्न :
जिम जानु हुन्छ ?
फेसनमा कतिको रुची छ ?
मनपर्ने खानेकुरा नि ?
कतिको रिसाउनु हुन्छ ?
वास्तविक जीवनमै जिग्री प्रेमी भएको भए ?
पैसा बोक्न बिर्सिएर अप्ठ्यारो परेको अनुभव छ ?
काठमाडौँको मन नपर्ने पक्ष नि ?
« श्रीमानले विदेशबाट पठाएको सात लाख लिएर अर्कैसँग हिँडेपछि तीन बालबच्चा बिचल्लीमा (Previous News)
(Next News) इजरायलमा हरितालिका तीज पर्व २०७४ सामुहिक रुपमा मनाउने पुर्व तयारी »